“Kooxda Real Madrid way u xiistay Cristiano Ronaldo” – Casemiro – Gool FM
“Kooxda Real Madrid way u xiistay Cristiano Ronaldo” – Casemiro
(Madrid) 26 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Casemiro ayaa qiray in kooxdiisu ay u xiistay Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa Madrid kaga soo biiray kooxda Manchester United xagaagii 2009-kii, waxaana uu u dhaliyey 450 gool 438 kulan oo uu u saftay kooxda reer Spain ka hor inta uusan u dhaqaaqin naadiga Juventus xilli ciyaareedkan 2018-19.
Juve ayaa ku dhow inay ku guuleysato horyaalka Serie A markale, sidoo kalena waxa ay joogaan siddeed dhammaadka Champions League, kooxda Real Madrid ayaana wajahaysa kal ciyaareed koob la’aan ah kaddib markii laga soo cirib-tiray isbuucyadii dhowaa koobabka Copa del Rey iyo Champions League.
Tan iyo markii uu u dhaqaaqay Magaalada Turin, Ronaldo ayaa dhaliyey 24 gool wadar ahaan kuwaasoo uu ku darsaday akoonkiisa goolasha, Casemiro ayaana soo jeediyey in Los Blancos ay u xiistay xiddiga ugu fiican adduunka sida uu yiri.
“Dabcan waan u xiisnay isaga, koox kasta oo adduunka ah ayaa u xiisi doonta Cristiano, isagu waa ciyaaryahanka adduunka ugu fiican.” ayuu Suxufiyiinta u sheegay Casemiro.
“Waxay ii ahayd farxad inaan isaga ka garab ciyaaray, laakiin xaaladaha ayaa isbedelaya oo isagu ma’ahan haatan ciyaaryahan Real Madrid ah.”
Kooxda Real Madrid ayaa haatan fadhisa kaalinta saddexaad ee horyaalka La Liga, waxaana ay 10 dhibcood ka dambeysaa hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Barcelona.